Qoraallada My iPhone ayaa la tirtiray si qalad iyo aad baan u jeclaan lahaa in aan u celinaynaa. Qof fadlan i caawin kartaa? - Jenniffer
Emmergency! Ma sida soo socota:
1) Jooji isticmaalka aad iPhone hadda
Haddii aad tirtiray fariimaha qoraalka ah ka iPhone kac, aan ka baxeen isla markiiba. Waxay meel ayaa aad iPhone, sugaya DTA cusub si ay u overwritten. Si aad u qasi lahaa qoraalka tirtiray on iPhone, fadlan isla markiiba joojiso iPhone, ama xogta cusub ka dhigi doonaa, kuwaas oo fariimaha qoraalka ah tirtiray weligiis iska tageen!
2) Raadi computer ka qasi lahaa fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro iphone
Waxaad ma qasi karo fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro iPhone si toos ah. Halkii, waxaad u baahan tahay PC Windows ama Mac si loo soo celiyo tirtiray fariimaha qoraalka ah iPhone. Sønner ayaa, si fiican, sababtoo ah xogta cusub ahbaa waqtiga oo dhan, xitaa marka qof aad wici.
Ka dhig funaanado aad ka dib markii aad si shil tirtiray qoraalka iPhone. Waxaa suura gal ah in aad dib u heli kartaa. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad kala soo baxdo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) iyo doorato mid ka mid ah 3 hababka soo kabashada sida ay xaaladda qasi lahaa fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro iphone.
Solutions 1: tirtireyso Deletd iPhone Qoraallada ka iPhone (haddii ay wakhti aan dheerayn dabadeed aad tirtirto qoraalka iPhone)
Xalka 2: Soo Celinta fariimaha qoraalka ah dib ugu iPhone via kaabta Lugood (haddii aad xoojiyaa iPhone la Lugood)
Xalka 3: tirtireyso Text tirtiray on iPhone via kaabta iCloud (haddii aad xoojiyaa iPhone in iCloud)
Talooyin dheeraad ah Sida loo Delete Qoraallada joogto ah
Tirtireyso tirtiray Qoraallada on iPhone Software
The Caalamka software hore qasi lahaa fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro iPhone.
Tirtireyso fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro saefly iPhone oo si deg deg ah;
Restor tirtiray qoraalka iPhone leh ku lifaaqan;
Dhoofinta text tirtiray sida arki iyo editable HTML, XML, ama faylasha qoraalka;
Taageerada iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5s, 5, 4s, 4, 3GS iyo macruufka dambeeyay 9;
Solutions 1: ka iPhone tirtireyso Deletd iPhone Qoraallada
Tallaabada 1 Dooro "kabsado Device macruufka"
Download, rakibi oo ay maamulaan barnaamijka on your computer. Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah. Marka xiran si guul ah, waxaad arki kartaa sida uu furmo waxa si dhekhso ah ayaa muujinaysa dhanka midig. Dooro "kabsado Device macruufka".
Tallaabada 2 Scan qoraalka tirtiray on iPhone
Guji "Start Scan" in baarista iPhone ee qoraalka la tirtiray. Waxay qaadataa laga yaabaa in dhowr daqiiqo illaa baarista iPhone. Fadlan aad iPhone xiran computer. Ka dib markaas oo dhan text tirtiray on iPhone lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa ugu weyn. Waxaad iyaga ku arki kartaa mid ka mid ah oo aad u hubiso kuwa doonayo. Guji "Ladnaansho" si ay u dhoofiyaan on your computer sida HTML, XML ama file qoraalka.
Fiiro gaar ah: haddii aad isticmaalayso iPhone 4 ama iPhone 3GS, suuqa kala egtahay wax yar ka duwan. Ha welwelin! Ma waxa ay u muujinaysaa inaad sameyso.
Xalka 2: Soo Celinta fariimaha qoraalka ah via kaabta Lugood dib ugu iPhone
Tallaabada 1 Dooro "kabsado Lugood ee kaabta File"
Kadib markii ay Wondershare Dr.Fone ee macruufka, doortaan "Recovery ka Lugood ee kaabta File" iyo gurmad ugu dambeeyay Lugood oo ay ku jiraan farriimo qoraal aad tirtiray on iPhone. Guji "Start Scan" Macdan iPhone qoraalka la tirtiray ka Lugood gurmad file.
Tallaabada 2 Connect aad iPhone in computer ka iyo waxa laga baarayo
Ka dib markaas, waxaad arki kartaa in dhammaan faylasha in gurmad Lugood yihiin saaro, oo ay ku jiraan qoraalka. Riix Messages galeeysid bidix si aad u eegto fariimaha qoraalka ah mid-by-mid. Fiiri kuwa loo baahan yahay oo guji "Ladnaansho" qasi iPhone tirtiray qoraalka iyo badbaadin on your computer.
Xalka 3: tirtireyso Text tirtiray on iPhone via kaabta iCloud
Tallaabada 1 Dooro "kabsado iCloud files ee kaabta"
Orod Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer iyo dooran "kabsado iCloud files ee kaabta". Daaqadda pop-up ka, saxiixo in wiht xisaabtaada iCloud. Marka aad aragto oo dhan files gurmad, ee ka dooro mid ka aad doonayso in aad tirtireyso qoraalka la tirtiray iyo download it.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh tirtiray Qoraallada
Ka dib markii download iCloud gurmad file, aad file gurmad la Dr.Fone ee macruufka ah iskaan karo. Markaas, aad ku eegaan karo iPhone hal-by-mid la tirtiro qoraalka. Fiiri kuwa loo baahan yahay oo guji "Ladnaansho" si ay u dhoofiyaan si aad u computer
Video Tutorial: Sidee qasi lahaa fariimaha qoraalka tirtiraa iPhone
Dadka qaar tirtirto qoraalka ay iPhone si looga fogaado qof si aad u eegto ay gaarka ah. Tan iyo Wondershare Dr.Fone ee macruufka tirtireyso karaa qoraallada iPhone tirtiray, dadka isticmaala qaar ka mid ah weydii sida loo sameeyo fariimaha qoraalka ah tirtiray iPhone weligiis tageen. Jawaabtu waa mid fudud - isku day SafeEraser Wondershare in ay tirtirto fariimaha qoraalka ah ka iPhone. Hadda, Wondershare SafeEraser waa la cusboonaysiiyaa si loo masixi fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone . Si aad u gaarto goolkii, uma baahnid inaad si loo soo celiyo ama wax ka badan masixi aad iPhone. Dhammaan xogta tirtirayaa by Wondershare SafeEraser aan la soo kabsaday karaa, xitaa marka la Wondershare Dr.Fone ee macruufka.
Sida loo Delete fariimaha qoraalka on iPhone
> Resource > iPhone > Sidee soo celinta tirtiray Qoraallada on iPhone